Stirista waxay awood siineysaa Garaafkeeda Aqoonsiga cusub oo wata Xogta waqtiga-dhabta ah | Martech Zone
Khamiis, Juun 22, 2021 Monday, July 26, 2021 Douglas Karr
Macaamiisha ayaa wax ka iibsanaya dukaanka internetka kombiyuutarkaaga guriga, ku booqo bogga wax soo saarka goob kale oo kiniin ah, isticmaal taleefannada casriga ah si aad ugu dhajiso baraha bulshada ka dibna aado oo aad u iibsato shey la xiriira xarunta wax iibsiga ee u dhow.
Mid kasta oo ka mid ah la-kulannadaas waxay gacan ka geysaneysaa horumarinta astaamaha isticmaalaha oo dhammaystiran, laakiin dhammaantood waa noocyo kala duwan oo macluumaad ah, oo muujinaya is-gooni ah. Ilaa ay iskudhafan mooyee, iyagu wali waxay ahaanayaan noocyo kaladuwan adiga cinwaanada jireed, Aqoonsiyada Aaladda, dukaamada tafaariiqda dhabta ah, dukaamada khadka tooska ah, bogagga shabakadaha ee kujira, aaladaha moobaylka, laptop-yada, TV-yada kuxiran, iyo cabirrada kale ee aad dhexgalka kuleedahay.
Isku xiraha joogtada ah sida cinwaanka emaylka - oo badanaa loo adeegsado ujeedooyin gaar ah - ama qalab ayaa mideyn kara kalagoynta xogta kala duwan, abuurista garaaf aqoonsi oo isku dhafan oo matalaya aragtida guud ee reerka ama shakhsiyaadka u saamaxaya suuqleyda inay si wanaagsan u beegsadaan ololahooda si ay ula xiriiraan dhagaystayaasha.
Uruurinta iyo mideynta dhammaan xogtaas marka laga reebo uruurinta iyo mideynta dhammaan xogtaas, caqabadda ugu weyn ee garaafka aqoonsiga waxtarka leh ayaa ka dhigeysa mid hadda taagan. Iyada oo isticmaaleyaashu si isdaba-joog ah ula macaamilaan maalin kasta, way fududahay in xogta si dhakhso leh u noqoto mid dhacsan oo aan sax ahayn.
Laakiin hadda bixiyaha adeegyada suuq-geynta xogta ku saleysan ee Stirista ayaa kor u kacay, iyadoo la socota garaafka ugu horreeya ee waqtiga dhabta ah ee garaafka suuqa.
In kasta oo garaafyada aqoonsiga badankood la cusbooneysiiyaa 30-kii ama 90-kii maalmoodba, Garaafka Aqoonsiga OMNA - bandhigay by Stirista Abriil - cusbooneysiiya ilbiriqsi kasta.
Waqtigaas dhabta ah ee cusbooneysiinta xogta aqoonsiga isticmaale maahan raaxo, laakiin waa baahi. Ku xirnaanshaha isticmaalahu waa shaqo toos ah oo saxnaanta xogta ah, iyo qodobka ugu muhiimsan ee saxsanaanta waa u bislaanshaha xogta.
Waxaan sii wadeynaa inaan ka maqalno suuqleyda jahwareersan ee loo balan qaaday helitaanka xogta dhabta ah ee xogta sirdoonka macaamiisha kaliya si loo ogaado in badan oo ka mid ah waxa ay u adeegsanayaan la macaamilka macaamiisha iyo rajooyinku ay duugoobeen, xog aan sax ahayn. Stirista waxay suuq geynaysaa OMNA, garaafka ugu horeeya ee garashada aqoonsiga, kaas oo loo cusbooneysiiyay kan labaad waxayna siineysaa shirkadaha fikradaha ay u baahan yihiin si ay si fiican ugu fahmaan qoysaskooda bartilmaameedka ah - halka ay ka shaqeeyaan, sida ay u isticmaalaan lacagtooda, aaladaha ay adeegsadaan, iyo Meelaha ay booqdaan si nabadgelyo leh oo waafaqsan habraac sir ah.
Ajay Gupta, Madaxa shirkadda Stirista
Marka hore, xogta isticmaalaha si dhakhso leh ayey isu beddelaysaa Cinwaanka dariiqa, lahaanshaha qalabka, iibsiga xogta ama macluumaad kale waxay ka caawineysaa qeexida shaqsi ama qoys siyaabo u hogaansan asturnaanta. Kaliya ka fikir inta jeer ee maalintii aad doorato cusub oo ku saabsan daawashada waxyaabaha, daawashada barnaamijka, iibsashada wax, ama booqashada meel ka mid ah dunida dhabta ah.
Marka labaad, jawiga dhabta ah ee dadka ama qoysaska lala gaarsiinayo farriimaha la xiriira ayaa sidoo kale si xawli ah isu beddelaya. Inta badan gaar ahaan, cookie-ka saddexaad ayaa sii dabar go’aya, iyo awoodda beegsiga ama u tiirinta xayeysiiska aaladaha mobilada ayaa sii kordhaya. Xayeysiinta TV-ga toosan ayaa hoos u dhacaysa, iyadoo daawadayaashu ay u wareegayaan ilo kale oo waxyaabo ah.
Iyo sharciyo cusub iyo wacyigelin ku saabsan asturnaanta isticmaalaha ayaa ka dhigtay oggolaanshaha isticmaalaha iyo qarsoodi ahaanta xarun muhiim u ah xog ururinta ama maaraynta aqoonsiga.
OMNA waxay soosaaraysaa balaayiin isdhexgal ah oo ka kooban ilaa 500 aqoonsi muuqaal kasta. Haddii suuqleyda ay rabaan inay hoos uga hoos qodaan Garaafka Aqoonsiga oo dhameystiran, waxay marin ka heli karaan garaafyada ka kooban: in ka badan 90 milyan oo qoysaska Mareykanka ah ee ku jira IP Graph, in ka badan 1 bilyan aaladaha ku xiran Qalabka Sawirka, iyo xogta ku saabsan ujeeddada goobta iyo dhaqdhaqaaqa oo had iyo goor ah lagu cusboonaysiiyay Sawirka Goobta.
Sida suuqleyda badankood ogaadaan, xogta ku jirta cookies-ka saddexaad waxay ahayd mid si khaldan u khaldan tahay si kastaba ha noqotee, waxayna dadka u kala qaybisay qaabab dhireedka dhijitaalka ah ama isdhexgalka barnaamijka moobiilka oo aan daruuri ka tarjumeynin danahooda dhameystiran.
Taas bedelkeeda, xogta kowaad iyo labaad ee sameysa udub-dhexaadka garaafyada aqoonsiga sida 'Straista's OMNA' waa kuwo go'aamiya oo aad u sax ah. Is dhexgalka noocyo kala duwan xogta nafteeda, garaafyada noocan oo kale ah waxay bixiyaan sawir dhameystiran oo ku saabsan qof ama reerka dantiisa iyo tirakoobka dadka.
Layaab malahan, markaa, in garaafka aqoonsiga uu noqday aaladda udub dhexaadka u ah suuqleyda deegaankan cusub.
Waxay ku wargalin kartaa xayeysiiska la siiyay qoys la siiyay oo leh TV ku xiran (CTV) nidaamka deegaanka ee baahinta, fiilada, iyo korka sare ()Ott) adeegyada socodka. Deegaanada CTV ma helaan marinka loo yaqaan 'cookies' oo waa asal ahaan jardiinooyin darbi ku dheggan halkaas oo danaha daawadayaasha lagu go'aamin karo iyada oo la isku dhafayo noocyada kala duwan ee xogta aqoonsiga ee garaafka aqoonsiga.
Jaantus garaaf ayaa sidoo kale ku hagi kara xayeysiinta ama fariimaha kale aaladaha mobilada xubnaha qoyska, ama xayeysiiska iyo waxyaabaha loo gudbinayo isticmaaleyaasha la xaqiijiyay ee websaydhka calaamadda
Iyada oo ay jiraan noocyo badan oo qalab iyo aalado ay heli karaan macaamiisha, mid ka mid ah arrimaha ugu waa weyn ee soo wajahda suuqleyda ayaa soo gudbineysa farriimo khuseeya dhammaan marinnada isdhexgalka - laakiin waxay soo koobeysaa inta jeer si aysan daawadayaashu u dareemin duqeyn. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira dhibaatada loo aaneynayo saameynta farriinta la siiyay ama ololeynta iibsashada ugu dambeyn, si loo qiimeeyo waxtarka kharashka suuqgeynta la siiyay.
Habka ugu fiican ee taas lagu sameyn karaa waa iyadoo la fahmo qoys ama shaqsi qalabka iyo adduunka dhabta ah, iyadoo la adeegsanayo shax aqoonsi dhameystiran oo casri ah. OMNA waxay u oggolaaneysaa noocyada inay wataan xogtooda kooxda-koowaad ee macaamiishooda iyo booqdayaasheeda wax ka yar 24 saacadood, isbarbar dhiga iyo kobcinta astaamaha xogta OMNA si summaddu wax badan uga ogaato dadkeeda.
Maaddaama uu cudurku sii yaraanayo, suuqleyda ayaa hadda wax ka qabanaya adduun cusub oo soo ifbaxaya xogta macaamiisha. Garaafyada aqoonsiga sida MONA waa aalado lagama maarmaanka u ah marinka bartilmaameedka iyo u-lahaanshaha shuruudaha xayeysiistayaasha iyo ku-xirnaanshaha iyo baahida gaarka ah ee macaamiisha, xawaare ka turjumaya xawaaraha nolosha.
Halkan Riix Si Aad Uhesho Macluumaad Dheeraad ah oo ku saabsan OMNA
Tags: ajay guptaxogta akhlaaqdaku xiran tvctvDataxogta dadkagaraafka aqoonsigadanahagaraafka aqoonsiga omnadusha sareiibso xogtaiibsiga ujeeddokiciyahaxiisaha daawadayaasha